ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ & Applications ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးအဖွဲ့ & စှမျး
ကျွန်ုပ်တို့၏ Certificate & ဂုဏ်ထူး
crane Hydraulic Dual-ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
IYJ Hydraulic ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
IYJ-C မှာစီးရီးသင်္ဘောကြီး & positioning ကိုဝန်တင်လက်လှည့်စက်
IYM စီးရီး Anchor ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
IYJP စီးရီး Hydraulic Capstan
IGH Hydrostatic ကိုသတ်ဂီယာအုံ
IMB စီးရီး Hydraulic မော်တော်
IMC စီးရီး Hydraulic မော်တော်
INM စီးရီး Hydraulic မော်တော်
IPM စီးရီး Hydraulic မော်တော်
IAP စီးရီး Hydraulic Pump
I3V စီးရီး Hydraulic Pump
120m³ / ဇ ~ 1000 m³ / ဇ dredger စနစ်များ
အမျိုးမျိုးသောစက်မှု Hydraulic System ကို
ကိုသတ် & ဂီယာစက်ပစ္စည်း
IYJ-C မှာစီးရီး Moore & နေရာချထားဝန်တင်လက်လှည့်စက်
IYPJ စီးရီး Hydraulic Capstan
INC စီးရီး Hydraulic မော်တော်
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Download Data Sheet
စက်မှု Configuration: This type hydraulic winch consists of valve blocks with function of brake and overload protection, ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ, planetary gearbox, belt brake,tooth clutch,drum,capstan head and frame. Customized modifications for your best interests are available at any moment.
အဆိုပါ Mooring Winch‘s Main Parameters:
1st Layer ပေါ်မှာ rated ဆွဲထုတ် (KN)
1st Layer (ဍ / မိနစ်) မှာမြန်နှုန်း
စည် Displacement (mL / r ကို)
ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တော် Displacement (mL / r ကို)
rated System ကိုဖိအား (MPa)
မက်စ်။ System ကိုဖိအား (MPa)
မက်စ်။ 1st Layer (KN) ရက်နေ့တွင် Pull
ကြိုး Layers အရေအတွက်
စီးဆင်းမှု (L / မိ)
Planetary ဂီယာအုံ Model
IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1 (ဈ = 251)
ယခင်: Factory source 2020 Net Sale Hydraulic Transmission
နောက်တစ်ခု: ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တော် - INM3 စီးရီး
ငါးဖမ်းလှေသည်ဟိုက်ဒရောလစ် Moore ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
ဟိုက်ဒရောလစ် Moore ဝန်တင်လက်လှည့်စက်စီးရီး
သင်္ဘောသည် Hydrualic Moore ဝန်တင်လက်လှည့်စက်
နေရပ်လိပ်စာ: No.288 Batouxi လမ်း, Ningbo, Zhejiang, တရုတ်
SANY, Planetary ဂီယာအုံ, ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ, လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်တင်လက်လှည့်စက်, ဟိုက်ဒရောလစ်ဝန်တင်လက်လှည့်စက်, ဝန်တင်လက်လှည့်စက်,